Ngobusuku Bonisa ummemezeli uSteve Higgins Profile
Nantsi i-biography emfutshane ye-'Tonight Show' isaziso se-Higgins
UStephen Higgins unezihlangu ezinkulu zokuzalisa.
U-Higgins ngummemezeli omtsha we -Tonight Show . Umculi, umbhali kunye nomdlali weqonga wenza uqale ngoFebhuwari 2014, evakalisa ukuvakalisa intetho yomhla wokugqibela, uJimmy Fallon. Kwaye nangona kukho ukungathandabuzeki ukuba uHiggins uthatha inxaxheba yakhe ngokungathí sina, ufikelela kwiidravitas zesimo ngoxolo.
"Kuphelile nje," u-Higgins utshela iRejista yaseDes Moines .
"Amantombazana amahle abeka iimpepha kuwe kwaye enze iinwele zakho. Unxiba iifanele ezintle. Uhamba kunye nalo mfana wenze izinto ezihlekisayo ukuze uhlekise abantu. "
U-Higgins wazalelwa ngo-Agasti 13, 1963, e-Des Moines, e-Iowa. Unina, uMarian, wayesekhaya kwaye uyise, uHarold, waqalisa ukusebenza kwenkqubo yesikolo saseWest Des Moines.
Ukulingana kwakusegazini lakhe kwangaphambili - kwaye igazi labonakala ligijima kwintsapho. U-Higgins nabazalwana bakhe uDavid no-Alan, kunye nekatha kunye nomlingisi uDave Allen, baqulunqa i-comedy troupe Musa Ukuyeka Umhla Wakho Umsebenzi. Iqela liye laya e-Iowa ngaphambi kokuba liphule eLos Angeles kunye nexesha elikhulu.
Iphulo elikhulu kunye neSiteshi seKomidi
Bafumana ukuphuka kwabo kunye ne -Higgins Boys kunye ne-Gruber , umboniso wee-comedy umdlalo odlalwa kwiKhansela yeComedy, ekugqibeleni yaba yiComedy Central. Umboniso waboniswa iminyaka emibini kwaye yayingomnye wemiboniso yokuqala kumabonwakude.
Umboniso wenziwe ngokubambisana nguJoel Hodgson, ngoko umdali kunye nomdlali weqonga lokuqala kwi- Mystery Science Theatre 3000 .
Ngamafutshane, le nkqubo yafumana abadlali abahleli etafileni etafuleni, besela ikhofi kunye nokutshaya. Baza kukhokela kunye nokuphuma kwimizobo-okanye iziqendu ezipheleleyo zemibukiso ye-TV endala - kunye namahlaya kunye namahlaya.
U-Higgins kunye nomntakwabo uDave ekugqibeleni bafikelele kwi -Jon Stewart Show , umboniso weentetho kwi-MTV eyayinomdla we- Daily Show umphathi we-Stewart ixesha elide ngaphambi kokuba enze lukhulu kwi-Comedy Central show.
Xa uStewart ekhanseliwe, u-Higgins akazange alinde ixesha elide ngaphambi kokuba afike kwi-gig yakhe. Ngaloo mini, ngo-1995, waqashwa njengombhali ngoMgqibelo woMgqibelo .
I-Higgins isebenze kwi- SNL ukususela ngoko, njengombhali nomvelisi. Uqhubela phambili loo msebenzi nje ngokuba umsebenzi wakhe kwiCoight ubhaqa. Uya kuhamba phantsi kwii-ofisi ze- SNL kwimini-ntsuku ukuba enze umsebenzi wakhe wokuvakalisa umsebenzi we-Fallon's show.
I-Higgins idibana ne-Fallon
I-SNL yilapho u-Higgins ehlangene no-Fallon. Waqala ukubhala iimpawu zeAgonon ecaleni kwebhodi, ngokuqhelekileyo ukudala amahlaya amaninzi kunye neemeko awayecinga ngazo - amahlaya kunye neemeko abazalwana bakhe babecinga ukuba zihlekisayo. Yile ngqungquthela kunye nethemba eliya kumela u-Higgins ukumemezela i-gig kunye ne-Fallon ngoLuve ebusuku .
Kwaye kukho iindlela ezininzi ezichaza ixesha lakhe kwi- SNL . Funda naluphi na ukubhala kwaye uza kufunda ukuba ukudlala kwe-Higgins kweso sihloko kwakhokelela ekuklolokeleni, ukulwa, kunye nama-shenanigane afanayo. Kakhulu kangangokuthi uMichael Schur, owayengumlobi we- SNL kunye nomdali we-NBC's Parks kunye noLonwabo , wadala uhlamvu luka-Andy no-Higgins engqondweni.
Ngeendlela ezininzi, unokubona ukuba i-Higgins mhlawumbi ibandakanya njani u-Andy obunjani obuhle, abuyiselwe ngasemva. Uyakubonisa ubusuku bonke ngendlela elula eqhuba ingxoxo kunye ne-Fallon kunye nezinye iindwendwe.
"Emva koko ukhangele kwaye ucinge, 'Hayi, kunjalo. Ndihleli apha ngaphaya kwelo monolog noRobert De Niro. Ndiyicinga ukuba eli lixesha elikhulu, '"utshele iRejista . "Kodwa ngokuqhelekileyo ngumsebenzi nje. Ndiyahamba yonke imihla kwaye nditya isidlo sasemini kwideskiti yam. "
'Abaqeqeshi beCape Bachelor' yoNyaka 14
Indlela Yokuba Umbukeli Wokubonisa Intetho
Biography kaNicolle Wallace
Fumana iiTikiti zamahhala kwi-'Jerry Springer Show '
Izilwanyana eziphantsi kakhulu, nguMark Twain
Indlela yokusebenzisa 'Estar' ngesiSpanish
Ingaba i-Novice ingena i-AC Condenser entsha?
Iingcaphuno zoKhuthaza uMfundisi weBantu abadala
Imbali yekhamera yeDamera
Funda iNjongo yokuThunjwa kweThungeight of Ship
I-Stegosaurus yafunyaniswa njani?
Iinqununu ezili-10 eziphezulu ezingayi kuguqula
Yintoni AmaKikhs Ayakholelwa Ngayo NgoThixo Nendalo?
Umzekelo we-ANOVA Calculation
Kubandakanywa nezingane kwiZenzo zobuPagan
I-Straight ne-Strait: Amagama aqhelekileyo adidekile
Izizathu Zokuthenga I-Jeep Wrangler Unlimited Model
I-Top Ten Latin Dance Dance kwiimifanekiso
Yazi iiVenzi zakho eziNcedisayo!
Mehrgarh, Pakistan - Ubomi kwi-Indus Valley Ngaphambi kweHarappa
Ewe, abantu bahlala kwiNyanga